Galaxy A10 မှာ Under Display Fingerprint Scanner ကိုတွေ့ရတော့မလား? | MyTech Myanmar
Galaxy A10 မှာ Under Display Fingerprint Scanner ကိုတွေ့ရတော့မလား?
Vivo ကနေ စလိုက်တဲ့ In-Display Fingerprint Scanner က ခုချိန်ဆို Flagship ဖုန်းတွေတင်မကဘဲ Mid-Range ဖုန်းတွေမှာပါ သုံးနိုင်ဖို့ တဖြည်းဖြည်း ကြိုးစားလာကြပါပြီ။ OnePlus 6T, Mi 8 EE, Mate 20 Pro တို့လို Flagship Level တွေတင်မကဘဲ Vivo V11 တို့လို Mid-Range Level ဖုန်းတွေမှာပါ တွေ့လာရပါပြီ။
အစက Samsung ကတော့ In-Display Fingerprint Scanner ကို မသုံးလောက်ဘူးလို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် Slash Gear Source က ရတဲ့ သတင်းအတိုင်းဆို Samsung ရဲ့ A Series ထဲမှာ အသစ်ထွက်လာမယ့် Galaxy A10 ဖုန်းမှာ Under-Display Fingerprint Scanner (UDFS) သုံးတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ Apple ကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့နဲ့ နောက်ကလိုက်လာတဲ့ Huawei ထက်လည်း နောက်ကောက်မကျန်ခဲ့ရအောင် ဆန်းသစ်မှု တစ်ခုခုတော့ လုပ်ရမယ်လို့ တွေးလိုက်ပုံရပါတယ်။ In-Display Fingerprint Scanner ဆိုတာ ခုမှ အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်ပေမယ့် Samsung အတွက်တော့ ခုမှ ပထမဆုံးစသုံးမှာပါ။
သတိထားကြည့်မိမယ်ဆိုရင် Samsung က သူ့ရဲ့ A Series တွေမှာ ရှိသမျှဖုန်းတွေနဲ့ မတူကွဲထွက်အောင် တစ်ခုခုလုပ်နေကျပါ။ Galaxy A8s တုန်းကလည်း ထိပ်ဖက် ကင်မရာအပေါက်လေးနဲ့ ထွက်ခဲ့ပြီး A9 တုန်းကလည်း ဘယ်သူမှ မသုံးဖူးတဲ့ နောက်ကျောဘက် ကင်မရာ ၄လုံးကို ပထမဆုံး စသုံးလိုက်တာပါ။
ဒါပေမယ့် In-Display Fingerprint နည်းပညာက အသစ်အဆန်းမဟုတ်တော့တဲ့အချိန်မှာ Samsung အနေနဲ့ သူများနဲ့မတူတဲ့ နည်းပညာကို A10 မှာ ထုတ်သုံးဦးမှာပါ။ အခုလည်း လာမယ့် CES 2019 ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ Screen နည်းပညာသစ်ဖြစ်တဲ့ Sound on Display (SoD) နည်းပညာကို မိတ်ဆက်လာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုတစ်ခါတည်း Sound On Display (SoD) နည်းပညာအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်ချင်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေက တဖြည်းဖြည်း Bezel တွေပျောက်အောင် လုပ်လာကြချိန်မှာ နည်းပညာအသစ်အသစ်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီ SoD နည်းပညာကလည်း ဖုန်းမှာ Speaker ရဲ့ နေရာကို ဖယ်ထုတ်လို့ရအောင် အစားထိုးလို့ရမယ့် နည်းပညာပါ။ Speaker အစား ဖုန်းရဲ့ Screen ကနေ အသံထွက်လာအောင် လုပ်ထားတဲ့နည်းပညာဖြစ်ပေမယ့် သူလည်း ခုမှ အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်ကလည်း Bezel တွေကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ချဖို့ MiMix တွေရဲ့ Earpiece Speaker မှာ Piezoelectrice Vibrator တွေု သုံးပြီး တုန်ခါခြင်းအားဖြင့် အသံထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာကို သုံးခဲ့ဖူးပြီးသားပါ။
ခု SoD ကလည်း အဲဒီနည်းပညာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ဒီနည်းပညာနဲ့သာဆို နောင်လာမယ့် နှစ်တွေအတွင်းမှာ ဘေးဘောင်လုံးဝမရှိတဲ့ ဖုန်းမျိုး မြင်ရကောင်းမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ Samsung အနေနဲ့ S Series ဖုန်းအသစ်တွေမှာ စမိတ်ဆက်လာနိုင်ချေ ရှိပေမယ့်လည်း Galaxy A Series မှာ စမ်းပြီးစသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ လာမယ့် Galaxy A10 တွေမှာ ထူးထူးခြားခြား နည်းပညာအပြောင်းအလဲလေးတွေကို မြင်တွေ့ရဦးမှာပါ။
Ref: Dignited, TechRadar
Vivo ကနေ စလိုကျတဲ့ In-Display Fingerprint Scanner က ခုခြိနျဆို Flagship ဖုနျးတှတေငျမကဘဲ Mid-Range ဖုနျးတှမှောပါ သုံးနိုငျဖို့ တဖွညျးဖွညျး ကွိုးစားလာကွပါပွီ။ OnePlus 6T, Mi 8 EE, Mate 20 Pro တို့လို Flagship Level တှတေငျမကဘဲ Vivo V11 တို့လို Mid-Range Level ဖုနျးတှမှောပါ တှလေ့ာရပါပွီ။
အစက Samsung ကတော့ In-Display Fingerprint Scanner ကို မသုံးလောကျဘူးလို့ ထငျထားခဲ့ပမေယျ့ Slash Gear Source က ရတဲ့ သတငျးအတိုငျးဆို Samsung ရဲ့ A Series ထဲမှာ အသဈထှကျလာမယျ့ Galaxy A10 ဖုနျးမှာ Under-Display Fingerprint Scanner (UDFS) သုံးတော့မယျလို့ သိရပါတယျ။
စမတျဖုနျးဈေးကှကျမှာ ထိပျဆုံးမှာ ရှိနတေဲ့ Apple ကို အမီလိုကျနိုငျဖို့နဲ့ နောကျကလိုကျလာတဲ့ Huawei ထကျလညျး နောကျကောကျမကနျြခဲ့ရအောငျ ဆနျးသဈမှု တဈခုခုတော့ လုပျရမယျလို့ တှေးလိုကျပုံရပါတယျ။ In-Display Fingerprint Scanner ဆိုတာ ခုမှ အသဈအဆနျးတော့ မဟုတျပမေယျ့ Samsung အတှကျတော့ ခုမှ ပထမဆုံးစသုံးမှာပါ။
သတိထားကွညျ့မိမယျဆိုရငျ Samsung က သူ့ရဲ့ A Series တှမှော ရှိသမြှဖုနျးတှနေဲ့ မတူကှဲထှကျအောငျ တဈခုခုလုပျနကေပြါ။ Galaxy A8s တုနျးကလညျး ထိပျဖကျ ကငျမရာအပေါကျလေးနဲ့ ထှကျခဲ့ပွီး A9 တုနျးကလညျး ဘယျသူမှ မသုံးဖူးတဲ့ နောကျကြောဘကျ ကငျမရာ ၄လုံးကို ပထမဆုံး စသုံးလိုကျတာပါ။
ဒါပမေယျ့ In-Display Fingerprint နညျးပညာက အသဈအဆနျးမဟုတျတော့တဲ့အခြိနျမှာ Samsung အနနေဲ့ သူမြားနဲ့မတူတဲ့ နညျးပညာကို A10 မှာ ထုတျသုံးဦးမှာပါ။ အခုလညျး လာမယျ့ CES 2019 ပှဲမှာ သူ့ရဲ့ Screen နညျးပညာသဈဖွဈတဲ့ Sound on Display (SoD) နညျးပညာကို မိတျဆကျလာဦးမှာဖွဈပါတယျ။
ခုတဈခါတညျး Sound On Display (SoD) နညျးပညာအကွောငျးကို ပွောပွလိုကျခငျြပါတယျ။ စမတျဖုနျးတှကေ တဖွညျးဖွညျး Bezel တှပြေောကျအောငျ လုပျလာကွခြိနျမှာ နညျးပညာအသဈအသဈတှေ ပျေါလာပါတယျ။ ဒီ SoD နညျးပညာကလညျး ဖုနျးမှာ Speaker ရဲ့ နရောကို ဖယျထုတျလို့ရအောငျ အစားထိုးလို့ရမယျ့ နညျးပညာပါ။ Speaker အစား ဖုနျးရဲ့ Screen ကနေ အသံထှကျလာအောငျ လုပျထားတဲ့နညျးပညာဖွဈပမေယျ့ သူလညျး ခုမှ အသဈအဆနျးတော့ မဟုတျပါဘူး။
လှနျခဲ့တဲ့ ၃နှဈလောကျကလညျး Bezel တှကေို တတျနိုငျသလောကျ လြှော့ခဖြို့ MiMix တှရေဲ့ Earpiece Speaker မှာ Piezoelectrice Vibrator တှေု သုံးပွီး တုနျခါခွငျးအားဖွငျ့ အသံထုတျပေးနိုငျတဲ့ နညျးပညာကို သုံးခဲ့ဖူးပွီးသားပါ။
ခု SoD ကလညျး အဲဒီနညျးပညာနဲ့ ခပျဆငျဆငျပါပဲ။ ဒီနညျးပညာနဲ့သာဆို နောငျလာမယျ့ နှဈတှအေတှငျးမှာ ဘေးဘောငျလုံးဝမရှိတဲ့ ဖုနျးမြိုး မွငျရကောငျးမွငျရနိုငျပါတယျ။ Samsung အနနေဲ့ S Series ဖုနျးအသဈတှမှော စမိတျဆကျလာနိုငျခြေ ရှိပမေယျ့လညျး Galaxy A Series မှာ စမျးပွီးစသုံးလိုကျမယျဆိုရငျတော့ လာမယျ့ Galaxy A10 တှမှော ထူးထူးခွားခွား နညျးပညာအပွောငျးအလဲလေးတှကေို မွငျတှရေ့ဦးမှာပါ။
MyTech Myanmar2018-12-28T10:14:12+06:30December 27th, 2018|Mobile Phones, News, Samsung|